विचारलाई विकास गरेर क्रान्तिलाई अघि बढाउँदै जाने क्रममा क्रान्तिको आत्मगत स्थिति बलियो हुन्छ : सुदर्शन-Nepali online news portal
विचारलाई विकास गरेर क्रान्तिलाई अघि बढाउँदै जाने क्रममा क्रान्तिको आत्मगत स्थिति बलियो हुन्छ : सुदर्शन
कमरेड सुदर्शन, तपाईं कार्ल माक्र्सलाई कसरी सम्झनुहुुन्छ ?
कार्ल माक्र्सका योगदानहरू केके हुन् ? बुँदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न ?
माक्र्सले भन्नुभएको थियो– पहिले बेलायतमा क्रान्ति हुन्छ अथवा विकसित राष्ट्रमा पहिला क्रान्ति हुन्छ तर लेनिनको पालामा आउँदा युरोपको पनि अलि कम विकसित देशमा क्रान्ति भयो । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
कमरेड सुदर्शन, पछिल्लो शताब्दीमा माक्र्सवादको राम्रो प्रयोग गरेको देश नेपाल हो । यो विश्वले मानेको कुरा पनि हो तर यहाँको क्रान्ति पनि असफल भयो । यसको कारण के होला ?
अब हामी जनवादी क्रान्ति भएको मुलुक चीनतिर जाऊँ । माक्र्सले जे सोच्नुभयो त्यो लेनिनले गर्नुभएन । रुसमा जे भयो त्यो चीनमा भएन । चीनमा माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त कसरी लागू गरियो त ?
कमरेड किरणले पनि भनिसक्नुभयो । अहिले एउटा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ अथवा व्यापार युद्धका रूपमा घोषणा गरिरहेका छन् । त्यो व्यापार युद्ध केका लागि छ भने फेरि पनि आफ्नो बजार कायम गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरू लागिरहेका छन् । त्यसका साथसाथै यस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ कब्जा गर्न पनि उनीहरू लागिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा अहिले अमेरिकाले चीनलाई कर बढाइरहेको छ । त्यस्तै किसिमलाई युरोपियन युनियनलाई पनि २५ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । यो खालको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यस्तो किन भैरहेको छ भने चिनियाँ माल अमेरिकी बजारमा बिकिराखेको छ । चिनियाँ मालले अमेरिकी माललाई प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । जितिरहेको छ । यसको मतलब बजार कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । यसखालको व्यापार युद्ध भैरहेको छ । व्यापार युद्धको अर्थ के हो भने उनीहरूलाई अन्धराष्ट्रवादतिर लगिरहेको छ । यो व्यापार युद्धले अन्ततः आफ्नो बजार कब्जा गर्नका लागि, एकाधिकार कब्जा गर्नका लागि, सेना र हतियारको आवश्यकता हुँदोरहेछ र त्यसकै लागि उनीहरू हतियार निर्माण गर्न लागिरहेका छन् । अब नेपालतर्फ फर्कंदा के हो भने यहाँका कथित कम्युनिस्टहरूले सरकार समालेका छन् तर उनीहरू सामाजिक दलाल हुन् र अब सामाजिक फासिवादतिर जाँदैछन् । त्यो सामाजिक फासिवाद केमा व्यक्त भैरहेको छ भने नम्बर एक– क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गर्नमा व्यक्त भएको छ, नम्बर दुई– राष्ट्रघातमा व्यक्त भएको छ । नम्बर तीन– जनघातमा व्यक्त भैरहेको छ । त्यो महँगी र भ्रष्टाचारमा व्यक्त भैरहेको छ । त्यो चर्को करमा व्यक्त भैरहेको छ । यो फासिवादउन्मुख छ । यो स्थितिबाट क्रान्तिकारीहरूको निष्कर्ष के हुनुपर्छ भने किरणले भनेजस्तै आफ्नो आत्मगत तयारी गर्नुपर्दछ । उनीहरूले जसरी सैन्य तयारी गरिरहेका छन् त्यसलाई क्रान्तिकारीहरूले चुनौती दिनुपर्छ । त्यसलाई विचारले लैस गराउनुपर्दछ । त्यसका लागि माक्र्सवादमा विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसमा पनि दर्शनमा विकास गर्न जरुरी छ । दर्शनमा विकास गर्नुको कारण के हो भने समाजवाद आएर त्यो टिकेन भनियो र त्यसलाई टिकाउन दर्शनको विकास गर्न जरुरी छ । समग्रमा माक्र्सवाद विकास भएन भने हामी जित्न सक्दैनौँ । हामीले सैन्य विज्ञानमा पनि विकास गर्न जरुरी छ किनभने आज नयाँ खालको युद्धको परिस्थिति विकसित भएको छ । त्यसैले जसरी वस्तुगत स्थिति तयार भएको छ उनीहरू सङ्कटैसङ्कटमा पुगेका छन् ।
अझ वस्तुगत स्थिति त झन् साम्यवादनजिक पुगिरहेको छ । उनीहरू अति केन्द्रीकरण र अति एकाधिकारमा पुगेका छन् । यसले के गर्छ भने समग्र विश्वलाई ग्लोबलाइजेसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकासले यो सारा चीजले एकठाउमा पुरयाएको छ । यसले के देखाउछ भने क्रान्तिकारीहरूले समाजवादी विचारलाई सूचनाप्रविधिमार्फत भूमण्डलीकरण गर्ने हो भने यसले समाजवादलाई अझ नजिक ल्याउँछ । त्यसैले विचारलाई विकास गरेर क्रान्तिलाई अघि बढाउदै जाने क्रममा नै हाम्रो आत्मगत स्थिति पनि सुदृढ हुँदै जान्छ । त्यसका साथै क्रान्तिकारीहरूका बीचमा अझ छलफल, बहस र एकता गर्दै जाने क्रममा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र हाम्रो आत्मगत स्थिति बलियो हुन्छ । क्रान्तिकारीहरूले विजय प्राप्त गर्छन् । नेपाली समाज समाजवादमा पुग्न सक्छ र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ।
इराताेखबरसँगकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश ।